द्वन्द्वतिर बढिरहेका पाइलाहरु
तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको र चारवटा प्रदेशमा बाँकी रहेको तथा दुई हप्तापछि हुन गइरहेको निर्वाचनको बाँकी प्रदेशको निर्वाचनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा दुई मत छैन ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र प्रादेशिक संरचनामा देश गएपछि प्रादेशिकताको नेपाली ढाँचाको व्यावहारिक प्रयोगको लागि पनि निर्वाचन चाहिएको छ ।
हिजोको दिनमा समग्र मधेस एक प्रदेश भनी आन्दोलन गर्ने दलहरुले एक मधेस पाँच प्रदेश बन्दा पनि स्वीकार गरेकै हुन् एक प्रदेश मागकर्ताहरु । यसकारण जनतालाई सधैँ बलिको बोको बनाउने र सधैँ आन्दोलन गर्ने कुरामा त्यत्ति विश्वास सर्वसाधारणमा नभएको देखिएको छ ।
मधेसको राजनीतिले फेरि द्वन्द्वतिर आफ्ना पाइलाहरु बढाइरहेको स्पष्ट भएको छ । हिजोको दिनमा छ महिनासम्म आन्दोलनका सहयात्रीहरु अहिले दुई चिरामा विभक्त भई कसको यात्रा ठीक भन्ने छुट्याउन मुस्किल हुने वातावरण तयार भएको छ ।
हिजो आन्दोलनका एजेन्डाहरु के के थिए ? गत पुस–माघतिर प्रचन्ड सरकारले चैतमा चुनाव गर्ने कुरोलाई बहसमा ल्याउँदा किन विरोध गरिए ? विरोध गर्ने आधारहरु के के थिए ? सर्वसाधारण नागरिक त्यो समय सम्झन चाहन्छन् ।
त्यत्तिवेला के कति कारणले मधेसी दलहरुले चुनावको विरोध गरेका थिए ? जहाँसम्म सर्वसाधारण नागरिकको सबाल छ संविधान संशोधन नै मुख्य मुदा हो त्यत्ति वेलाको ।
संविधान संशोधन नभइकन कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्न नदिने त्यत्तिवेलाको बोली नयाँ साल बदलिएपछि पुरानो भइसक्यो ।
साल बदलियो, समय बदलियो, बोली बदलियो र अडान बदलियो ।
एउटा स्मृति ताजै छ – बैसाखमा एकै चरणमा हुने भनी घोषणा भएको निर्वाचनको मितिलाई किन दुई चरणमा हुने भनी घोषणा गर्न पुनः बाध्य भयो सरकार र निर्वाचन आयोग ?
धेरै पुरानो समय नभइसकेकोले पुरानो अखबारले यसको कारणको बखान गर्ला नै । बैसाखमै हुनुपर्ने निर्वाचन जब जेठमा स¥यो तब के कारणले सरेको थियो ? के एक महिनाको अवधिमा कुनै परिवर्तन भएको छ र जसको कारणले अहिलेको निर्वाचनमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यता आयो ?
पहिले चैतमा हुन नदिने शक्ति, त्यसपछि बैसाखमा हुन नदिने शक्तिले अचानक के प्राप्त गरेर चुनावमा होमिए भन्ने प्रश्न जनमानसमा व्याप्त छ ।
के सधैँ आन्दोलन नै गरेरमात्र हुन्छ ? आन्दोलनमा जनसहभागिता कति हुने गरेको छ ? आन्दोलनले कति भूगोल लिने गरेको छ ? आन्दोलनले कतै विकास भएको छ ? शान्तिको अनुभूति जनताले गर्नै नपाउने ? आन्दोलन भनेको सडकमा जनतालाई उतारेर सडक, उद्योग, बजार, विद्यालय आदि बन्द गर्नु मात्र हो ?
यी र यस्ता आधारभूत कुरा बन्द गरेर घाटा कसलाई भएको छ ? फाइदा कसले लिएको छ ? जति घाटा हुन्छ, त्यसको बराबर पनि उपलब्धि हुन्छ ? लगातार छ महिनासम्म सबै बन्द भएको समयमा परेको मारको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म भएको छ त ?
कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेका थिए – बुलेटभन्दा मतपत्र बलियो हुन्छ । अर्थात बुलेटले गर्न नसक्ने क्रान्ति र परिवर्तन मतपत्रले गर्न सक्छ ।
लोकतन्त्रलाई मान्ने पनि र लोकतन्त्रको सर्वोत्कृष्ट कार्य भनेको निर्वाचनबाट जनताको मनोबल बुझ्ने, जाँच्ने, आफ्नो मुदालाई जनताबाट अनुमोदन गराउने तथा आफ्नो मागलाई पूरा गर्ने – गराउने अधिकार प्राप्त गर्ने र आफू नै त्यो ठाउँमा पुगेर आफूले अरुलाई अधिकार दिनेसम्मको अवस्थामा कसैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ भने त्यो लोकतन्त्र नै हो ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचनदेखि कोही पनि कुनै पनि हालतमा डराउनु हुँदैन । किनभने लोकतन्त्रमा निर्वाचन त्यो लडाइँ हो जसले धेरैको घमन्डलाई चकनाचुर पार्छ ।
नयाँ विचारलाई स्थापित गराउने, नयाँ विचार जन्माउने र नयाँ विचारलाई स्थापित गराउने आधार लोकतन्त्रमा चुनाव नै हो । चुनावबाट भागेर, जनताको बीचमा जान डराएर, लोकतन्त्रको मुख्य मूल्य मान्यतालाई अटेरी गरेर कसैले आफूलाई जनताको पक्षमा काम गरेको भनेर भन्न मिल्दैन ।
अहिलेसम्मको आन्दोलन र सडक संघर्षले जनतालाई जति प्राप्त भएको छ, तिनीहरुलाई संस्थागत गरी प्राप्त अधिकारसित जनतालाई व्यवहारमा परिचित गराउन पनि चुनावमा जानु उचित हुन्छ ।
यिनै दुईथरि विचारमा अहिले समाज विभाजित भएको छ । नेपाली संचारमाध्यमहरुले पनि दुवैथरिलाई प्राथमिकतासाथ नागरिकमाझ राखिरहेका छन् ।
जसरी दुई शक्तिका दुईथरि विचार छन्, प्राथमिकता दिने संचारमाध्यम फरक भएजस्तै नागरिकले पनि आफ्नो रुचि फरक देखाइरहेका छन् ।
कतिपय नागरिकलाई आन्दोलनको तर्क सही लागेको छ भने कतिपयले चुनावलाई सही मानेका छन् । सर्वसाधारण नागरिक निकै अलमलिएका छन् ।
पहिलेका निर्वाचनहरुमा अनेक उम्मेदवार आएर आफूलाई राम्रो भनी आफूलाई मत दिन आग्रह गर्थे तर अहिले एकथरि मतदान गर्नुपर्छ र अर्कोथरि आएर निर्वाचनलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ भनेर प्रचार गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।
तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको र चारवटा प्रदेशमा बाँकी रहेको तथा दुई हप्तापछि हुन गइरहेको निर्वाचनको बाँकी प्रदेशको निर्वाचनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा दुई मत छैन । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र प्रादेशिक संरचनामा देश गएपछि प्रादेशिकताको नेपाली ढाँचाको व्यावहारिक प्रयोगको लागि पनि निर्वाचन चाहिएको छ ।
हिजोको दिनमा समग्र मधेस एक प्रदेश भनी आन्दोलन गर्ने दलहरुले एक मधेस पाँच प्रदेश बन्दा पनि स्वीकार गरेकै हुन् एक प्रदेश मागकर्ताहरु ।
यसकारण जनतालाई सधैँ बलिको बोको बनाउने र सधैँ आन्दोलन गर्ने कुरामा त्यत्ति विश्वास सर्वसाधारणमा नभएको देखिएको छ ।
आन्दोलनमा जनमत देखिन्छ भन्ने र मतपत्रको माध्यमबाट जनताको परिवर्तनप्रतिका आकांक्षा देखिन्छ भन्ने दुवैथरिले जनतालाई नै केन्द्रविन्दु बनाएका छन् । एकथरिले चुनावमा जान डराएको आरोप लगाएका छन् भने अर्काथरिले कुर्सीको लागि मरिहत्ते गरेको आरोप लगाएका छन् ।
दुवै मधेसवादीको दुईथरिको विपरीत तर्कले सर्वसाधारणमा अन्यौल बढेको छ । मतदातालाई आन्दोलित गरेर प्राप्त गरेको मत, मतदातालाई अन्यौलमा राखेर गराइएको मतदान, द्वन्द्वरत अवस्थामा गरिएको मतदानले समग्रमा नागरिकको वास्तविक अभिव्यक्तिको प्रतिबिम्ब दिएको मान्न सकिँन्न ।
जनतालाई अलमलमा पार्ने काममात्र होइन यी । देशको राजनैतिक आकाशमा कालो बादल देखिने र राजनैतिक आकाशलाई धुमिलो पार्ने खेल पनि हो ।
देशले राजनैतिक निकास पाउन थालेको बेला अन्य कुनै तरिका नपाएर जनतालाई सधैँ अलमलमा पार्ने यो राजनैतिक खेल यतिवेला उत्कर्षमा पुगको छ । सामाजिक संजालहरुमा चुनावमा जानुको औचित्य र नजानुको औचित्यबारे व्यापक बहस हुन थालेको छ ।
समाजले एक पक्ष देखा पर्दा अर्को पक्षको सबल कुराको बखान गर्दै सामुन्नेलाई विपक्षी मानेर आरोप लगाउन थालेका छन् । दुई पक्षमा समाज विभक्त हुन थालेको छ । समाजमा सबै कुरो निर्वाचनमुखी भइसकेको वर्तमानमा राजनैतिक वातावरण धुमिल हुन पुगेकोमा सर्वसाधारणमा उत्साह छैन । सर्वसाधारण नागरिक खुसी छैनन् ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई यस द्विविधाले मनलाई शान्ति दिएको नहोला । नेपाली नागरिकको हैसियतले सबै दुःखी हुने यस प्रकारको खेल कहिलेसम्म चल्ने होला ? भन्ने कुरो नै अनिश्चित छ । दुई ध्रुवमा बाँडिएको देशको राजनीतिभन्दा अब अहिले दुई ध्रुवमा मधेस बाँडिएको छ ।
मधेसीको भावनामाथि आघात पु¥याउने दुई विचारले मधेसी बुद्धिजीवीलाई अन्तहृदयदेखि पीडित बनाएको छ । आहत बनाएको छ ।
मधेसमा कहिले के हुने भन्ने निश्चित छैन । कतिपयले चुनाव हुन्छ र कतिपयले चुनाव हुँदैन भनेर पनि भनिरहेका छन् । दलका नेताहरुका पनि दुईथरिको विचार आएका छन् ।
निर्वाचनको कुनै कार्यक्रमलाई नबिथोल्ने भन्ने कुरो पनि आएको छ र निर्वाचनको कुनै पनि कार्यक्रमलाई सजिलै हुन नदिने कुरो पनि आइरहेको छ । दुईथरिको विपरीत विचारलाई अहिले समाजले पचाइरहेको छ र पचाउने बाध्यता रहेको पनि छ ।
यदि निर्वाचनको लागि उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्ने दिन कुनै अनिष्ट वा समझदारी भएन भने असार दुई गतेदेखिको चौध गतेसम्मको हरेक दिन र हरेक घन्टा नेपालीको लागि साँच्चिकै सर्वाधिक प्रतिक्षाको जस्तो हुने छ ।
हरेक घन्टा र हरेक दिन राम्रोसँगमात्र बितोस् भन्ने कामना हरेकले गर्ने छन् । द्वन्द्वतिर बढेको जस्ता लाग्ने अहिलेका पाइलाहरु केवल भ्रम साबित होऊन् र दुवै पक्ष मिल्न नसके दुवै पक्षमा कुनै किसिमको प्रत्यक्ष द्वन्द्व नहोओस् ।
वैचारिक द्वन्द्वले भौतिक क्षति नपु¥याओस् ।